Khudbadihii laga jeediyay shirkii dowladda Federaalka iyo Midowga Murashixiinta | Dayniiile.com-Latest news from around the world
Home Warkii Khudbadihii laga jeediyay shirkii dowladda Federaalka iyo Midowga Murashixiinta
Khudbadihii laga jeediyay shirkii dowladda Federaalka iyo Midowga Murashixiinta
Wasiirka amniga ee Xukuumadda Soomaaliya Mudane Xasan Xundubey Jimcaale ayaa sheegay in Wasaaradda ay dhaqan gelin doonto heshiiska iyo is afgaradka lagu gaaray shirka wadatashiga ah ee caawa uu Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya la yeeshay Midowga Musharaxiinta, kaasi oo diiradda lagu saaray qodobo ay ka midyihiin arrimaha doorashooyinka iyo amniga dalka.
Wasiirka amniga ayaa xusay in Xukuumadda ay markasta ka go’antahay inay wada hadal la yeelato cidkasta oo qabto tabasho.
Guddoomiyaha Gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho mudane Cumar Maxamed Maxamuud ayaa sheegay in caawa bulshada Soomaaliyeed ay u tahay talaabo guul ah, isla markaana wixii hadda ka dambeeya loo istaagi doono sidii wada jir loola dagaalami lahaa cadowga Ummadda Soomaaliyeed ee Al-Shabaab.
Madaxweyaha Dowlad Goboleedka Hirshabeelle Mudane Cali Guudlaawe Xuseen ayaa sheegay in ay tahay wax lagu farxo shirka caawa guusha ku soo dhamaaday oo ay Alle uga mahadcelinayaan in caawa la isku afgartay waxkasta oo tabasho laga qabay, isagoo rajo wanaagsan ka muujiyay in dalka ay ka dhici doonto doorasho xaq iyo xalaal ah oo raali la isaga wada yahay, ayna sii socon doonaan kulamada nuucaani oo kale ah.
Madaxweynaha Dowlad Goboleedka Galmudug Mudane Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor ayaa Ummadda Soomaaliyeed uga tacsiyadeeyay dadkii ay waxyeelada ka soo gaartay falkii dhacay 19-kii February, isagoo mahadcelin u jeediyay cidkasta oo gacan ka geysatay qabsoomidda shirka, ayna sii socon doonaan kulamada lagu sii amba qaadayo hannaanka doorashooyinka dalka.
Axmed Cabdi Kaariye ayaa ugu baaqay in cidkasta oo ka maqan arrimaha ku saabsan in dalka ay ka dhacdo doorasho ay ka soo qeyb galaan shirka.
Xildhibaan Mustaf Sheekh Cali Dhuxulow oo ka mid ah murashixiinta ayaa sheegay in Midowga Musharixiinta ay ka go’antahay hirgelinta waxyaabaha lagu heshiiyay.
Siyaasiga Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame oo madasha ka hadlay ayaa xusay in 19-kii February ay ahayd dhacdo xanuun badan, balse kulamo kale oo gaar ah laga yeelan doono, isagoo daboolka ka qaaday in wixii maanta ka dambeeya ay sii socon doonaan shirarka looga hadlayo misiirka dalka.
Madaxweynihii hore ee Galmudug mudane Cabdikariin Xuseen Guuleed ayaa hoosta ka xariiqay in wada hadalka ay yeesheen Wafdiga uu hogaaminayo Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya iyo Midowga Murashixiinta ay horseedi doonto in dalka ay ka dhacdo doorasho xor iyo xalaal ah, isagoo xusay in labada dhinac ay muujiyeen isu tanaasul.
Madaxweynihii hore ee Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud aya sheegay in hadafka ugu weyn ee la hiigsanayo ay tahay in dalka ay ka dhacdo doorasho, isagoo bogaadiyay qofkasta oo ra’yi qaba ama tabasho laga dhageysto lagana qanciyo.
Madaxweynihii hore Soomaaliya ahna Guddomiyaha Midowga Murashixiinta Mudane Shariif Sheekh Axmed ayaa ugu horeyn uga mahadceliyay dadkii ka soo shaqeeyay qabsoomidda shirka, waxaana uu intaa ku daray in dowladnimada ay aas aas u tahay sharci iyo wada hadal.
“Nidaamka dimoqraadiga ah ee aan maanta ku shaqeynayno waa nidaam curdun ah, dadka Soomaaliyeed waa inay daremaan taas, waxaan aamisnaahay in ilalainta sharciga ay tahay mid dastuuri ah, qofkastana uu arrintas gacan ka geysto, dhamaanteen aan wada ilaalino sharciga”. Ayuu yiri Mudane Shariif Sheekh Axmed.
Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya Mudane Maxamed Xuseen Rooble oo shirka soo xiray ayaa sheegay in heshiis is afgarad ah la gaaray caawa, isla markaana ay Ummadda Soomaaliyeed u tahay habeen taariikhi ah.
“Shacabka Soomaaliyeed waxaan leeyahay waan idin maqanahay, waa noo muhiim xoriyatul qowlka, mudaaharaad waa waajib dastuuri ah oo qokasta oo Soomaali ah uu xaq u leeyahay, waxaa kaloo waajib ah in laga wada shaqeeyo sugidda amniga, shacabka Soomaaliyeed waxaan ka codsanayaa inay nagu garab istaagaan sidi uu dalkan uga dhici lahayd doorasho xor iyo xalaal ah” ayuu yiri Ra’iisul Wasaare Rooble oo hadalkiisa ku daray in dowladda ay ka go’antahay qabsoomidda doorashada.
Ra’iisul Wasaare Rooble ayaa Midowga murashixiinta ka codsaday inay gacan ka geystaan sidii dalka ay uga dhici lahayd doorasho, waxaana uu hoosta ka xariiqay in dalka uu ku jiro xaalad adag oo dhanka caafimaadka ah, maadaama uu soo labo kacleeyay xanuunka COVID-19, qofkastana looga baahanyahay in uu ka qeyb qaato sidii loo yareyn lahaa faafidda cudurka.
Previous articleMadaxweynihii hore ee Soomaaliya Shariif Sheikh Axmed oo sheegay in wada hadalka ay la yeesheen Xukuumadda uu ahaa mid wax tar leh
Next articleQaxootiga ka soo cararay Dagaalada dalka Yemen oo soo gaaray magaalada Boosaaso
Xoghayaha guud ee Qaramada Midoobay Antonio Guterres oo soo dhoweeyey dib usoo celinta xiriirka diblumaasiyadeed ee Kenya iyo Somalia.
Waxaa khamiistii magaalada Muqdisho looga dhawaaqay Madal loogu magac daray Badbaado Qaran ay ku mideesan yihiin Madaxda maamulada Puntland, Jubbalaland, Gudoomiyaha Aqalka sare iyo...
Ciidamada Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo caratuur iyo Difaac ka samaystay wadada isku...
Talaal Dunida dhan iska diiday oo Soomaliya la keenay
Musharax Xasan Cali Kheyre oo ku baaqay in leysku soo ...
Qaramada Midoobey oo ku eedeysay ciidamada Eritrea inay boqolaal ruux ku...
Fanaan kale oo caan ah oo xalay Muqdisho ugu geeriyooday Xanuunka...
Wasiirada Ganacsiga, Gaadiidka, Warshadaha iyo Dalxiiska ee Burundi, Immaculée Ndabaneze...
Gantaalka Shiinaha: Wasaaradda arrimaha dibadda oo ka hadashay dhibaatada uu geysan...
Ciidamada Bad baado Qaran oo la wareegay qeybo ka mid ah...